Waa maxay Damul-Jadiid, halkey salka ku hayaan, hadafkoodu-se maxuu yahay? W/Q Bishar Haji |
Waa maxay Damul-Jadiid, halkey salka ku hayaan, hadafkoodu-se maxuu yahay? W/Q Bishar Haji
Waa maxay Damul-Jadiid, halkey salka ku hayaan, hadafkoodu-se maxuu yahay?
Maarso 22 2013
Akhristow intaanan u gelin ka hadalka Kooxda Damul-jadiid, waxaan jeclahay inaan si kooban u qeexno Xarakada Al-islaax, maadaama ay weli kooxdani si khaldan u isticmaasho magaca Ururka Al-islaax oo ay waa hore ka fallaagowday .
SOO IFBIXII FIKIRKA IKHWAANKA SOOMAALIYA
Fikirka Al-islaax ama Ikhwaanka-Soomaaliya ayaa ka soo jeeda Manhajka guud ee urur weynaha Ikhwaanul-Muslimiinka caalamiga ah, kaasoo ah dhex’dhexaadnimo iyo in diinta loofidiyo si xikmadeysan oo dhaxdhxaad ah, wacdi iyo waano iyo akhlaaq wanaagsan, sidoo kale in umadda jahliga laga saaro, islamarkaana laga dhiso dhanka tacliinta diiniga ah iyo tan maadiga ah labadaba, lagana fogaado shidada iyo xagjirnimada.
Fikirkan Ikhwaaniga ah ayaa soomaaliya ka soo ifbaxay dabayaaqadii lixdamaadkii, waxaana keenay nin la oran jitay Sh.Abdi Qani Sh.Ahmed Sh.Aadam oo ah ninka aas aasay majmac la oran jiray Alnahdatul-Culamaa, (hinqashada ama baraaruga culimada), Sheekha oo masar wax ku soo bartay islamarkaana aaminsanaa fikirka Ikhwaanu-muslimiinka caalamiga ah ayaa u sabab noqday in fikirka Ikwanka soo gaaro dalka Soomaaliya.
Sh. Abdi Qani Sh. Ahmed Sh. Aadam oo ku dhashay Degmada Xudur ee gobolka Bakool, ayaa waalidiinta dhalay waxaay ka soo jeedeen deeganka Soomaalida ee dalka Ethiopiya.
Sheekha oo jagooyin sarsare ka soo qabtay dalka Soomaaliya,sida lataliye maxkamada sare iyo Wasiirka Cadaalada ayaa markii dambe waxay isku dheceen, Kacaanka oo ka hor yimid fikirka Ikhwaanka, taasoo kaliftay inuu u baxsado dhanka dalka Kuwayt.
Sheekha oo lahaa waxbarasho tayadeedu sareyso ayaa markiiba xibin buuxda ka noqday Golaha Fuqahada dalka Kuweyt. Sheekha ayaa ku geeriyooday dalka Kuwayt, sanadii 2007/08/17. naxariistii eebe Allah ha ka waraabiyo aamiiin.
DHALASHADII AL-ISLAAX AMA IKHWAANKA-SOOMALIYA
Ururka oo in mudda ah ku mashquulsanaa fidinta afkarihii uu xambaarsanaa ayaa ku guuleystay soo dumida ama hanashada quluubta in badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan, dabaqada sare ee bulshada, kuwaasoo isugu jiray, culimo, aqoonyahanno iyo arday. Madaama la gaaray guul wax ku ool ah oo dhanka fikirka ah, ayaa la go’aansaday in fikirka ficil loo bedelo, waxaana si rasmi ah loogu dhawaaqay urur loogu magac daray AL-islaax, 1978/05/11, dalka Saudi Arabia.
Al-islaax waxaa aas aasay culimada kala ah:
1. Sheikh Mohammed Ahmed Nour
2. Dr. Ali Sheikh Ahmed Abubakar
3. Mr. Ahmed Rashid Sheikh Hanafi
4. Dr. Mohammed Yusuf Abdi
5. Mr. Abdullah Mohammed Abdullah
Waxaan soo sheegnay in inta badan xibnaha ururka ay ahaayeen, dabaqada sare ee bulshada, Culimo kawaadir muthaqafiin ah oo xambaarsan shahaadooyin jaamacadeed, sidaasi darteed marna saaxada kama marneyn tartan “siyaasad, awood iyo dhaqaale-raadis ah”.
Markii la soo gaaray dabayaaqadii sideetamaadkii, oo ay dhamatay shahrul-casalkii, Kacaankiina sii liicayo, ayaa waxaa soo muuqday ifafaalo wanaagsan iyo in mardhow laga bixi doona ashuun ku adimka, Waxaa bilowday baratan dhanka siyaasadda ah, waxaa soo ifbaxay khilaaf u dhexeeya hogaanka sare ee Ururka.
Khilaafka ururka ayaa sii laba lixaadsaday, markii ay bur’burtay dowladdii Jaale Siyaad, waqtigaas oo la filayay inuu ururku ka faaiidi doono, maadaama ay meesha baxday dowladii xooga badneyd ee dagaalka kula jirtay, laakiin taas bedelkeeda waxaa sii kordhay loolankii siyaasadeed. Markan waxaa ururka soo dhex galay khilaaf ku saleysan”Qabiil iyo Qabyaalad “, waana wakhtiga loo waqlalay, kooxda Damul-jadiid
WAA MAXAY DAMUL-JADIID?
Waxaa waayadan isa soo tarayay hadalhaynta Urur ujeedo badan ah oo la magac’baxay “Damul jadiid” ayadoo dadkuna ay siyaaba kala duwan u fasirayeen. Hadal hayntan ayaa timid ka dib markii Xassan Sheik Mahamuud oo ka tirsan Ururka uu si lama filaan ah ugu guuleystay doorshooyinkii kal hore-Agoosto-2012 ee madaxtinimada Soomaaliya.
Dhanka luqada magaca Damul-jadiid waa carabi, waana 2labo erey oo is fangashan, oo ah “Dhiig iyo Cuseyb“.Magacan sida muuqato waa mid xambaarsan dareen gaar ah . Xaqiiqada iyo danta loola baxay ilaahbaa naga og, laakiin ugu yaraan ma aha mid u wanaagsan maqalka dhegaha qofka caadiga ah.
In kasta oo Dhiiga-cusub (damul-jadiid) lagu dhawaaqay 2006 da, hadana waxaa la rumeysan yahay in kooxdani fallaagoowday horaantii sagaashameeyadii, laakiin aan si rasmi ah loo shaacinin, waxay ahaayeen dhaqdhaqaaq qarsoon oo ku qaraabta magaca xarakada Al-islaax iyo wejiyo kaloo badan.
URURKA DHIIGA-CUSUB IYO DAGAALADII AHLIGA
Dad xog ogaal ah ayaa rumeysan in kooxda Dhiiga-cusub oo ah koox bragmaatik ah (pragmatic), islamarkaana u badan maalqabeeno ay ka mid tahay kooxihii dhex dabaashay fitantii iyo dagaaladii sokeeye, hadana aan siibin shaarkii xarakada ilaa iyo haddana gashan, Ahdaafta ugu weyn ee aay higsanayaan ayaa ah “maal iyo mansab”
Madaxweyne Xassan Sheik ayaa la sheegay inuu si toos ah ugu lug lahaa dagaaladii sokeeye.Xog hoose ayaa lagu ogaaday inuu Madaxweyne Xasan Sheekh uu xubin buuxda ka ahaa ururkii dalka burburiyey ee USC, kaasoo lagu xasuusto, dil iyo xasuuq shacab, boob iyo dhac hanti qaran , kufsi iyo barakicin dadweyne.
Mr.Xassan iyo Gn.Caaydiid: Kulamo ka badan 30 sodon ayaa la sheegay in Madaxweyne Xassan Sheekh iyo Generaal Caydiid ay wada qaateen sanadihii u dhexeeyey 1992-1995 ka hor inta uusan geeriyoonin Caydiid.
Ilaa hada wararka la hayo ayaa ah kuwo xanbaarsan xoga farabadan, waxaana la soo gaarsiinayaa ilaa wakhtigii dagaalkii bilooyinka qaatay ee lagu halaagsamay, una dhaxeeyey labo beelood.
Waxaa laga warhayaa in markii uu fashilmay kulankii Qaahira-masar ee la isugu keenay kooxaha soomaalida, uu xassan madax ka ahaa koox ka socotay dhanka beeshiisa oo wadahadal kula jirtay dhinacii ka soo horjeeday ee ay isku hayeen gacan ku haynta Muqdisho.
Mr. Xassan iyo Eenoow: Madaxweyne Xassan, waxuu xariir dhaqaale iyo mid siyaasadeedba la lahaa ING. C/qaadir Eenoow,Bashiir raage shiiraar, maxamed dheera, Abukar cadaani, oo dhammantood ahaa hogaamiye kooxeedyo maalqabeenno ah. Madaxweyne Xassan ayaa wax ka ogaa furitaanka Dekadda Ceelmacaan oo ay shirka ku ahayeen, waxayna xubno ka ahaayeen intooda badani Ururka Dhiiga-Cusub ragga aan kor ku soo xusnay.
Waxaan hayaa tibaax ah inay jirto Sharikad lagu magac’aabo Kheeyraad oo ka dhexeysa madaxweynaha iyo Eenoow, laakiin war badan kama hayo sharikadan iyo meesha ay ku taalo, waxaan codsanayaa in la dabagalo.
Sahankii Mr.Xassan ee Jubaland: Sanadii 1988 dii, marki uu ka soo laabtay dalka India oo uu waxbarasho u aaday , waxaa la sheegay inuu sahmin ku sameeyay qaar ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan Jubaland, asaga oo sheegay inuu halkaas ka fuliyo howlo la xiriira samafal, laakiin la filayo inuu ahaa sahan la xiriirra “maal iyo mansab”. ilaa iyo hadana lama hayo, wax samafal ah ama raad xoojinaya sheegashada Mr. Xassan.
Shirkii Carta iyo Dhiiga-Cusub: Waxaan meesha ka maqneyn Jabuuti, gaar ahaan Madaxweyne Geele, oo xibin ka ah Ururkan, sidoo kale Cabdi qaasin Salaad, Sh. shariif iyo maalqabeeno kaloo badan, oo isugu jira Soomaali, carab iyo ajaanib kale, Shakhsiyaadkaas oo dabada ku wata sharikado ganacsi oo waaweyn.
Ururka Dhiiga-cusub ayaa qeybweyn ka qaatay abaabulka shirkii Carta-Jabuuti iyo doorashadii Cabdi Qaasin, sanadii 1999-2000 ee uu hormuudka ka ahaa Madaxweyne Geelaha Jabuuti. Waxaa la hayaa xog sheegeeysa in soo bixidda Cabdil Qaasin uu ka dambeeyay Ururka, gaar ahaan madaxweynaha martida loo ahaa, sidoo kale waxa dhacday in xibnihii barlamanka berigaa lagu daray xibna qarsoon oo si toos ah u mataleyay kooxda Dhiiga-Cusub (Damul-Jadiid).
DKM iyo Dhiiga-cusub: Dowladdii ku meel gaarka ahaeyd ee Sh. shariif , Madaxweyne Xassan waxuu ka ahaa la taliye qarsoon, sanaddii 2011-da Madaxweyne Xassan waxuu furtay xisbi ay xibnihiiso wada yihiin Dhiiga-Cusub (PDP), sidoo kale miisaaniyaddi sanadkan ee dowladda uu madaxa ka yahay waxaa qorsheeyay Arday wax ka barata Jaamacdda SIMAD oo uu leeyahay, Madaxweyne Xassan , iyada oo la heli karay khubaro arimahan ku xeel dheer oo ruugcadaa ah horena uga soo shaqeeyey wadammadda Caalamka oo illaa PHD degree wata.
GUUSHII URURKA DAMUL-JADIID KA SOO HOYEEN DOORASHADII OGOOSTO 2012.
Guusha madaxweyne Xassan ee doorashadii Ogoosto 2012, ma aheyn mid si dabiici ah u dhacday sida dad badani u maleynayaan, Waxay ku timid iskaashi wadajir ah oo aay sameeyeen qaar ka mid ah dowladaha caalamka sida dowlada Qadar iyo Dowladda Turkiga, iyo shakhsiyaad tujaar ah oo ka tirsan ururka Dhiiga-Cusub iyo kuwa calami ah oo dano kala gaar ah ka lahaa dalka Soomaaliya.
Booqashadii London, Madaxweyne Xassan wuxuu qirtay inuu ka tirsan yahay kooxda Dhiiga-Cusub iyo inuu weliba ku jiro xeyndaabkooda, oo la micno ah inuu fulinayo rabitaankooda dhaqaale iyo Awood, laaliin Ilaa iyo hadda lama oga jagada rasmiga ah ee uu ka hayo kooxda Dhiiga-Cusub (damul-jadiid), balse dadka qaarkii ay yiraahdaan Dhiiga-cusub taladooda la´aanteed waxba kuma dhaqaaqo .
Kooxda Dhiiga ay si weeyn u soo dhaweeyay markuu isu sharaxay xilka madaxweynaha, Aqoonyahanada Iyo taageerayaasha kooxda ayaa baahiyay qoraalo badan oo isugu jira, afsoomaali, Carabi iyo English. Waxay aad u adeegsanayeen TV.yada iyo Idaacaha Caalamiga iyo kuwa gudaha, ayaga oo ka dhigayay sida inuu yahay seylalaxo nabdoon( ninkii nabadeyn lahaa) oo soomaaliya loo soo diray, iyo in loo baxay nabad iyo warsan.
Aqoonyahanno ka tirsan Ururka oo ku sugan dalka Qadar ayaa madaxweyne Xassan iyo barnaamijkiisaba ka gaday dowladaha Qadar iyo Turkiga, iyada oo la wada ogyahay in Qadar tahay dawlda kaliya ee ah ikhwaanul-musliim, marka laga hadlayo dawladaha khaliijka waxayna si weyn u fangareysaa ururada ikhwaanul-muslimiinka ee ka jira wadamada carbta iyo islaamka, iyada oo adeegsaneysa hab walba, sida lacago, diblumaasiyad, iyo Telefeshinka caalamiga ah ee Al-Jazeera.
Dhiiga-cusub ayaa ku guuleystay baafinta information ah, inay matalaan aragtida cusub ee isbeddel doonka Ikhwaanka Soomaaliya, sidaas darteedna loo baahan yahay in la caawiyo si lamid ah, kacdoonada gu’ga carbeed ee ay hor boodayaan Ururka Ikhwaanka.
Istambuul-Turkiya: Go’anka ah inuu xassan ku soo baxo doorashooyinkii bishii ogoosto 2012 -ka ayaa lagu gaaray shirkii ka dhacay Istambuul-Turkiya, (kulan dhex roorsi ah oo ay ka qeybgaleen dowladaha Qadar, Turkiya, xubna ka tirsan Dhiiga-cusub oo ka tagay dalka Qadar, iyo kooxa soomaali ah oo ganacsato u badan oo danahooda ka dhex arkay). Madaxweyne Xassan Sheeikh bilaash laguma dooranin, Qiimaha halkii cod ama Xildhibaan ayaa gaaray 25000 USD.
Guusha Mr Xassan aad baa looga soo dhaweeyay geyiga soomaalida, Sababtoo ah waxaa isku soo beegmay, soomaalida oo daashay islamarkaana dhibsatay wajiyada 2labada shariif iyo Dowlad ku meel gaar ah iyo Dhiiga-Cusub oo isticmaalay kaarka Al-islaax + aqoon’laaan loo qabay Ururka iyo CV-ga Madaxweyne Xassan. Taas waxay keentay in Dhiiga-cusub loogu marxabeeyo si shuruud la’aan ah.
GUNAANAD:KOOXDA DHIIGA-CUSUB (DAMUL-JADIID) WAXAY SHABAHDAA KOOXA BADAN:
Parasitic Capitalism: Dhiiga-Cusub (Damul-jadiid), waa urur Bragmaatik ah,Ra’simaali hantigoosad naxariis daran (Parasitic Capitalism), oo wax walbana ka hormarinaya maslaxadooda dhaqaale, haba yaraatee mana jiro wax xeyndaab ah oo ay ka leexanayaan,- Diin iyo maslaxo dal iyo dad masaakiin ah, sharci umadadeed iyo qaanuun dowli ah toona, Waa koox gacansaar la leh sharikado iyo hantiilayaal caalami ah oo doonaya inay dab saaraan dalka iyo dadka soomaliyeed,
Dhankaas waxaay ka shabahaan Nidaamkii George W. Bush oo malaayiin qof u dilay batrool iyo Naafto, ceebna u soo jiiday dalka mareykanka oo u dhaqmay sida dowlad maafiyo ah, waxaa dhulka galay dhaqaalihii iyo karaamadii mareykanka, sidoo kale dhaqaalihii caalamka. Dhibka intaa la eg ee dunida wada saabtay waxaa u sabab ahaa koox tujaar ah oo ka fikiray dano dhaqale oo u gaar ah. Dhiiga -cusub (Damul-Jadiid), haba tabar darnaado, lakiin waxaa la yiri nimba taagtiisay qodax ugu tagtaaye itaalkooda yar soomaaliyaa dhib ugu fian, Dhiiga-cusub waxuu horinayaa dagaal sokeye si loo gaaro dano dhaqaale iyo awood.
Maafia Dhiiga-cusub (Damul-jadiid, waxay lacago ku kharashgareeyeen sidii loo dili lahaa dad Soomaliyeed, mana aha arin la dhayalsani karo, intii uu socday kulankii magaalada Garbahaarey ee gobola Gedo, waxaay direen 150000 USD, si loo laayo Ergadii Jubaland ee uu hogaaminayay Awlibaax, sidoo kale waxaa jira lacago badan oo gaaray meelo kale oo ay Kismaayo kamid tahay.
Rabshadii lagu beegay 23 febraayo oo ku beegneyd maalinkii uu furmi lahaa Shieweynaha Jubaland, waxaa ku daatay dhiig dad aan waxba galabsanin, sababta loo laayay dadkaas waxay aheyd in lagu gaaro maal iyo Mansab ,dhinacan waxay ka shabahaan Maafiyada caalamiga ah sababtoo ah in qaabka noocan ah wax loo dilo waa astaamaha Maafiyada.
Shabaab:Dhiiga-cusub (Damul-jadiid, sidaan horay u soo sheegnay waa koox ka fallaagowday Ururka Al-islaax, sida Al-shabaab uga falaagowday Ururka Salafiyiinta, sidoo kale waxay aaminsan yihiin qaacidada ay Shabaabku isticmaalaan ee ah: “Wax kasta oo na gaarsiinaya ujeedadayada waa noo xalaal” (The end justifies the means” haba noqoto in la sumeeyo Ceelasha biyaha laga cabo, ama la qarxiyo Arday iyo waalidiin.
Qodobadaas iyo kuwa kaloo lamid ah, sida wadaniyad xumo oo ah in danaha ururka laga hormariyo danaha qaranka, waxay ka shabahaan Alshabaab.
Warlord. Dhiiga-cusub (Damul-jadiid,waxay bilaabeen adeegsiga xeeladihii hore ee qabqablayaasha soomaaliya, dhaqankaas oo ah in magaca qabiilka lagu qaraabto, si loogu gaaro ahdaafta la doonayo, Dhiiga cusub ayaa Odayaasha Muqdisho iyo gobolada qaar ku beer laxawsada kaarka qabiilka si lamid ah, qabqalayaashii soo maray dalka.
Halkaasna waxay ka shabahaan Dagaaloogayaashii hore.
Ugudambeyn: Arinka laga baqayo in kooxdani mustaqbalka ku dhaqaaqdo ayaa ah labo arimood, wa midka hore inay iibiyaan dhulbeereedka u dhaxeeya labada wabi, Gaar ahan dhulbeereedka Jubooyinka iyo Shabeelada hoose, ayna ka iibiyaan sharikado beeraley ah oo ka kala socda daafaha dunida, sida Mareykanka amaba Yurub, inta soo hartana tujaarta Khaliijka, gaar ahaan Qadar.
Arinka labaad ayaa ah, inay wadar ahaan ama guud ahaan u iibsadaan ceelasha Shidaalka soomaaliya, gar ahaan ceelasha Jubaland ee dhaca dhanka xuduuda badda ee aan la wadaagno Kenya, si ula kac ah.
Dhiiga-Cusub : Is weydiinta badan iyo jahawareerka waxaa keenay, inta badan soomalida ma famsana ururkan oo Qaarbaa u haysta Qabiil, qaar kalaa u haysta Urur diimeed, qaarbaa u haysta wadaniyiin, qaarbaa u haysta Cilmaaniyiin, qaarbaa u haysta Dimoqraadiyiin, qaarbaa u haysta dad la doortay, halka qaar kalana waxayba u haystaan in kursiga lacag laga baxshay!!.
Intaba ma qaldana mana saxna, sababtu waxay tahay, manhajka kooxdan ayaa ku dhisan qaacidada ah: Wixii ka hor imanaya danaheena dhaqaale waa xaaraam, wixii waafaqana waa xalaal goolka la higsanayo waa “AWOOD IYO MAAL” Sidaas darteed, marka ay la dagaalamayaan Alshabaab, waxaay isticmaalayaan, kaarka wadaniyadda, hadana waxaad arkeysaa ayagoo isla Shabaabki u adeegsanaya la dagaalanka Jubaland, markana waxaay adeegsanayaan kaarka Qabiilka.
Kooxdan mustaqbalka waxay khatar ku tahay guud ahaan geyiga soomaaliya oo ay ku jiraan gobolada laga taageero.
DAM+JADIID = Economic warlord +Political Islam opportunists
Salaamaad kulli aafaad